Maitiro ekuongorora kwenguva refu-ndangariro: bvunzo dzakashandiswa | Kudzidziswa Kwekuziva
Kana tichitaura pamusoro penguva refu yekuyeuka tinoreva kune kwakaomarara kwakaitwa nevanhu codify, chitoro e pora ruzivo:
la yeEncoding ndiko kugadziriswa kweruzivo rwunofanira kuchengetwa,
nerefu racho nenzvimbo rezinesi kunoitirwa kusimbisa madimikira ivo vachichengetwa.
Zviripachena kuti, kuti ndangariro dzakareba dzishande, panofanira kunge paine mukana wekudzikamisa. (Banich, 2004).
Kana murwere achiongororwa neuropsychological kuongorora, rimwe rematambudziko aanowana kazhinji muhupenyu hwezuva nezuva rine chekuita ndangariro kwenguva refu. Hazvitomboitika, zvisinei, kuti munhu anenge auya pakuonekwa kwachiremba azokwanisa kutaura zvakajeka kuti rudzii rwekusakwana kwaanotambura (achifungidzira kuti zvechokwadi pane kushomeka). Zviri kuna chiremba kuti adudzire zvinotaurwa nemurwere (zvichimutungamira kana zvichikosha nemimwe mibvunzo) uye kuedza kunzwisisa kuti ndeipi nzvimbo yekurangarira matambudziko akakwenenzverwa anowira pasi pake kuti aongororwe.
Zvishoma senge chinyorwa pane bvunzo yekuongorora mabasa ehutongi, isu takasarudza kuita runyorwa rwemiedzo kuti tiongorore zvikamu zvakasiyana zvendangariro zvenguva refu, tichifunga kuti bvunzo haimbobatanidza basa rekuziva chete, uye kuti rondedzero haigone kuve inopedza simba.
Per approondondi TEMA Ongororo - Memory uye kudzidza bvunzo
Kunyangwe pasina kubvumirana pane iyo theoretical modhi iyo inogona kutsanangura zvese zvenguva refu zvekurangarira zvikamu uye hukama hwavo hwehukama, isu tinoedza muchidimbu kurondedzera chikamu chinowanzogovaniswa pakugovaniswa kuitira kuti tigone kuendesa mabvunzo maererano neiko kuiswa.
Yekureba-refu ndangariro inowanzo kukamurwa kuva maviri makuru matavi:
- yakajeka (kuziva kana kudonhedza)
- raireva (kusaziva kana kusiri kutsvagawo kana maitiro).
Nezvebazi rekutanga, kokorodzano tinotaura nezvezvekuwedzera chikamu mundangariro episodic (ndangariro dzechokwadi nezviitiko zvakatenderedzwa mudenga nenguva mavakazoitika), semantics (ruzivo ruzhinji rwepasi) uye rwe ndangariro (iyo pfungwa yekujairana nekusangana nechimwe chinhu zvakare, pasina chiitiko chakapfuura chine nzvimbo-yenguva mareferenzi).
Ndangariro dzakadzika dzinowanzo kukamurwa priming, inoshanda mukati mehurongwa hwekuona, semuenzaniso pamwe nekufambisirwa kwekupedzisa mazwi akamboonekwa, kutanga kubva kuchidimbu chavo, uye maitiro ekuyeuka, ndiko kuti, iyo inotibvumira kukwira bhasikoro kana kutyaira mota tisingazive nezve chiito che mota chakaitwa (Strauss et al., 2006).
Kunyangwe kutaurwa kwakawanda kweyemukati mirefu kwenguva ndangariro dzinooneka dzichiratidzika, mundima yemuropsychological varapi vanowanzoongorora chete yakajeka yekurangarira hunyanzvi (Rabin et al., 2005) uye, kunze kwekugadzirira kweumwe munhu nyanzvi, izvi zvimwe zvinokonzerwa dzinenge dzisipo zvachose dzebvunzo dzeyeuchidzo dzirimo, zvirinani muItaly panorama.
Kunyangwe kutaurwa kwakawanda kweyemukati mirefu kwenguva ndangariro dzirinoratidzika kuoneka, varapi vanowanzotarisa chete yakajeka hunyanzvi hwekurangarira mundima yeuropsychological.
Ngatipfuurire mberi kuti tiongorore mimwe miedzo inogona kushandiswa kune dzakasiyana-siyana zverefu zvekurangarira miseche.
Episodic memory. Iyi zvirokwazvo ndiyo nharaunda inonyanya kubhadharwa, zvakanyanya kubva pakuyedza maonero. Nekudaro, zvinofanirwa kutaurwa kuti pane musiyano mukuru pakati pemiedzo inowira munzvimbo ino. Chimbofunga nezveyedzo idzo dzinoda kuiswazve kwerwiyo (yatove yakarongedzwa, saka) uye izvo zvinoda kuti kuiswazve kwemanyorerwe emazwi, uye izvo zvinoda kuti kuronga kwakabatana kurangarirwe zvirinani), kana, zvakanyanyisa, dzimwe bvunzo. tarisa pazvirevo zvemashoko apo vamwe vanotarisa pazvinhu zvinooneka uye zvekunzwisisa. Zvakare hazvifanirwe kurerutswa ndiwo musiyano uripo pakati pezviedzo zvinoongorora antegrade ndangariro uye izvo zvinodzosera kudzokorora ndangariro (zvakanyanya kushandiswa).
Pakati pezviyedzo zve episodic memory tinowana zvinotevera kazhinji (tinopa rondedzero yevanonyanya kukoshesa):
Babcock's nyaya. Mhedzisiro yekudzidza kwenguva refu umo mavara mapfupi anoverengwa kune murwere anozofanira kuchidzokorora nekukurumidza uye maminetsi gare gare. Pane shanduro dzinoverengeka dzayo. Iyo inoshandiswawo zvakanyanya nekuda kwekutonga kwayo nekukurumidza.
Prose ndangariro (ENB-2). Kwayedza yakafanana chaizvo neiya yapfuura, iri mubhatiri Pfupi Neuropsychological Exam 2. Iyo ine mukana wekuyerwa kubva pamakore gumi nemashanu kusvika makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa, yekuve nezvakasiyana mamaki ekurangarira nekukasira uye yekuve mukati mebhatiri rinowanikwa zviri nyore uye nemutengo wakaderera kwazvo uchienzaniswa nevamwe vari pamusika. Kune rimwe divi, iyo chete ine yakatemwa (yakatemwa pa15th percentile), nekudaro ichiisa panjodzi yekusaona mamiriro emuganhu.
Narrative memory (NEPSY-II). Kwayedza yakafanana neBabcock's Tale asi yakanyanya kuomarara yerudzi rweruzivo inoverengwa kumurwere uye nemhando mbiri dzakasiyana dzeakatsanangura zvichienderana nezera reboka (makore 4 -10; makore 11-16). inopa yemahara uye inotungamirwa yekudzokororazve kudzidzira asi hapana kunonoka kupora. iri mubhatiri rakatumidzwa NEPSY-II.
Rey's 15-yeshoko bvunzo. Chinangwa chemuedzo uyu kuongorora kugona kwekutaura nemusoro uye ndangariro. Iyo inovhara zera renji kubva pamakumi maviri kusvika makumi masere nemasere ezera ezera uye manejimendi anotora ingangoita gumi nemaminitsi gumi nemashanu Inosanganisira matatu akafanana mafomu ayo anoderedza iwo maitiro ekudzidza mune akasiyana kudzokorora kweiyo bvunzo yekutarisa murwere kugona kwekuziva basa. Iyo bvunzo inoratidza yepamusoro yemukati kusagadzikana zvikoro (Van den Burg, 1999), kuyerwa kwakaringana-kutendeka kuvimbika (Mitrushina & Satz, 1991) uye kusadzidza kwakanakaMitrushina & Satz, 1991). Pakupedzisira zvinoita sekunge ine hutano hwakanaka hwekugara, kunyanya nezvekushanda muhupenyu hwezuva nezuva kwevarwere vane marwere akasiyana (Strauss et al., 2006).
Kudzidza mazwi rondedzero
Yekusarudza chiyeuchidzo chemazwi nekukurumidza uye zvakasarudzika (BVN 5-11; BVN 12-18). Iyo bvunzo yakafanana chaizvo neBuschke-Fuld, zvese zviri zviviri mumhando yezvinokurudzira uye nemhando yekutonga. Izvo zvinopesana neyekupedzisira kune erudzi rwevana vanonangwa uye vechidiki vane makore ari pakati pemakore mashanu negumi nerimwe (BVN 5-11) uye pakati pemakore gumi nemaviri kusvika gumi nemasere (BVN 12-18). Kusiyana neBuschke-Fuld, hazvitori mumashoko akawandisa kana asina kugadzikana mundangariro, asi chete huwandu hwemashoko akaburitswa muedzo hwepamberi uye muyedzo yakadzoserwa.
Huru kudzorerwazve kwemazwi (BVN 5-11). Muedzo wakafanana chaizvo neye Rey's 15 test test asi yakatarwa pavana kubva pamakore mashanu kusvika gumi nemumwe.
Runyorwa runyorwa (NEPSY-II). Bvunzo rakafanana chaizvo neizvo zvataurwa BVN 5-11, yevana vane makore manomwe kusvika gumi nemanomwe. Iyo zvakare ine irwo rwekuvhiringidza runyorwa kuti riongorore mukana wekupinda mukati uye kugadzirisa kudzokorodza, pamwe nekukurumidza uye kwakadzoserwa kupora. Izvo zvinotorawo mukati kupinda mukati nekudzokorora.
Memory uye kudzidza bvunzo (TEMA). Bhatiri yekuyeuka kwekuyeuka kubva pamashanu kusvika gumi nemashanu emakore. Ona apa kuti uwane ruzivo.
Kudzidza vaviri vaviri mazwi. Icho chiyero chekutanga chinosanganisira kuteerera kune akasiyana mapara mazwi uye kuyeuka kunotevera kweshoko rechipiri revaviri vaviri, mushure mekuteerera kuzwi rekutanga rakaverengwa nemuongorori. Hazvinyanyo kunetseka mushure mekugadziriswa kwezera uye dzidzo (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
Yemahara uye Yakasarudzika Sarudzo Yeuchidzo Yekudzidzira. It is a bvunzo inoongorora kugona kwekudzoreredza mazwi emahara, mushure mekudzidza nezvikwata zve semantic, uye mushure mekuita semantic. Inotendera iwe kuenzanisa mashandiro emurwere kune nekukasira kupora pamwe nekuita mukutungamira kupora. Inogona kubatsira sezvo ichiratidzika kuve nehanya nekuvapo kwechidimbu (Auriacombe et al., 2010).
Kudzidza mazwi gumi
Semantically zvine hukama uye mazwi asina hukama
Verbal supra-span kudzidza Buschke-Fuld. Iyo miedzo inonakidza nekuti, zvakasiyana neyakafanana miedzo yakafanana neye Rey's-15-izwi bvunzo, inoedza kukamuranisa mazwi ekutaura muzvikamu zvakasiyana, pfupi uye refu, zvichienderana nemurwere kukwanisa kupora mazwi pasina vanoverengwazve nemuongorori (Strauss et al., 2006). Iyo yeItaly vhezheni inoda ingangoita maminetsi makumi matatu ekutonga uye inogadziriswa pazvidzidzo kubva pamakumi mana kusvika makumi mashanu nemashanu emakore. Scores zvine mwero zvine hukama ne IQ saka, pakashaikwa fungidziro yehuwandu hwehungwaru, murapi anogona kuwedzera kushomeka kwememonic (Bishop, 1990). Kana zvichidikanwa kupa bvunzo iyi kakawanda pamusoro penguva, zvinofanirwa kuverengerwa kuti uyu muyedzo unokwana kubva mumhedzisiro yekudzidza. Zvinonakidza kuti kushomana kudiki kwakawanikwa pakati pezvakawanda zveyedzo iyi uye neyambotaurwa test yemashoko gumi nemaviri aRey uye izvi zvinoda kungwarira pakuvatarisa miedzo inogona kuchinjika, kunyangwe hazvo sezviri pachena vangangofananaMacartney-Filgate & Vriezen, 1988). Pakupedzisira zvinoita sekunge iyi muyedzo yakaratidza kushanda kwakanaka kwechisikigo, zvirinani muzvidzidzo zvine musoro wekushungurudzika, inotarisisa asi kwete yakananga kurudzi rwekukuvara kwehuropiStrauss et al., 2006).
Kuzivikanwa kwemazwi. Iyo ndeimwe yemayedzo mashoma kwazvo anowanikwa muItaly ekuzivikanwa nemazwi, inokurumidza uye nyore kuisa (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011) asi hazvisi nyore kuwana.
Chinzvimbo chinotenderera curve
Per approondondi Memory, IQ uye mamwe mabasa euchenjeri: nzira yekunzwisisa sei kana ikadzikira?
Rivermead maitiro ekuyeuka maitiro. It is a bhatiri kuongorora kutadza kwekuyeuka muhupenyu hwezuva nezuva uye kuongorora shanduko. Iyo yakaverengerwa pavakuru uye zvakaenzana mamaki anowanikwa kune yezera renji kubva pamakore gumi nemaviri kusvika makumi masere nemanomwe ekuberekwa (Brazelli et al., 1993) uye inotora maminetsi makumi maviri nemashanu. Izvo hazvitevedzere kune chaiyo yeanorentical modhi asi mune bvunzo inoedza kutevedzera izvo izvo mnemonic zvikumbiro muhupenyu hwezuva nezuva (Aldrich et al., 1991). Iyo ine zviyero zvishoma zvinoverengeka kubva episodic kusvika kune inofungidzirwa kurangarira, ichipfuura nekuyeukwa kunozivikanwa. SaBuschke-Fuld, mamwe madingindira ebhetri aya anokanganiswa ne QI (Cockburn & Smith, 1991; Fennig et al., 2002; Wilson et al., 1989) uye nekudaro kungwarira kunodiwa mukududzira kwavo, kunyanya kana kuongororwa kwekare kwekushanda kwemurwere pasi pekuongororwa kusati kwaitwa. Kubva pakuona kwekuvimbika inoratidzira yakanaka yemukati kusagadzikana, kwakakwana kuramba muyedzo-kuyedza (Munhu et al., 2001) uye chibvumirano pakati mafomu akafanana (Wilson et al., 1989). Iri bhatiri rinonetsekana kunyangwe nyoro ndangariro dzinovhiringidzika, riine huwandu hwakavimbika hwenhoroondo, nepo mamaki ekuongorora angaita kunge akanyanya (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011). Mukupfupisa, zvinoita kunge chishandiso chinowirirana kana ichienzaniswa neyekutanga ndangariro bvunzo dzinoshandiswa kazhinji.
Kwayedza yenzvimbo nhatu uye zvinhu zvitatu. It is a bvunzo kwenguva refu ndangariro kuongorora. Zvingaite kunge zvinokwanisa kukurumidza kuziva varwere vane dementia, asi zvisina kukodzera kusarudza vanhu vane MCI pane boka rinodzora. Zvakare, sekureva kwevamwe vanyori, iyo yekudzora sampuro ingangove iri shoma uye isina kudzikama (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
Autobiographical ndangariro kubvunzurudza. Seizvo zita rayo rinoratidzira, inoongorora kuvepo kwekudzokororazve amnesia uye inovhara zera renji pakati pemakore gumi nemasere kusvika makumi masere. Iyo bvunzurudzo inovhara zvikamu zvitatu zvehupenyu hwemurwere (18 - 80 makore, 3 - 0 makore, kubva pamakore makumi mana kusvika pamakore maviri pamberi pehurukuro). Kuwana mhinduro dzemibvunzo hakusi nyore. Izvo zvinodawo kusimbiswa kwezviitiko zvinorangarirwa (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 15).
Autobiographical memory test neCrovitz-Schiffmann.
1920-1965 zviitiko zviri kure kure mibvunzo.
Q80 uye Q60 kudzosera memory memory
Zviitiko zvinozivikanwa mibvunzo mibvunzo 1966 - 1997
Yekuyeuka kwekuyeuka kwezviitiko zvekare
Kuzivikanwa kwemazita evanhu vanozivikanwa
Kuzivikanwa kwezviso zvevanhu vanozivikanwa
Muedzo weziso rakakurumbira
Nzira yekudzidza Task
Kuzivikanwa kwechiso nezvivakwa. Iyo ndeimwe yemayedzo mashoma kwazvo anowanikwa muItari ekuona maitiro ekuona, inokurumidza uye yakapusa kuitisa (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011) asi hazvisi nyore kuwana.
Mufananidzo wakaomarara weRey-Osterrieth. Bvunzo rakagadzirirwa kuongorora kutaridzika-kuvaka hunyanzvi uye visuo-spatial ndangariro. Kune akasiyana mavhezheni uye calibrations. Vamwe vanyori vanocherekedza kushomeka kwekunzwa bvunzo iyi uye kudiwa kwehunyanzvi hwekuongorora mashandiro emurwere (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
Makosi supra-span. Chiyero icho chiri mukudzokorora kuteedzana kwakaenzana kwechubhu gumi nemasere (tafura imwechete yebvunzo bvunzo inoshandiswa) kanoverengeka, kuitira kuti uongorore kugona-kwekuona kugona kudzidza. Iyo bvunzo yakapusa uye yakavimbika, iine mukana wekushandisa akasiyana calibrations anofukidza huwandu hwese hwemakore makumi maviri nemashanu kusvika makumi masere nemashanu ekuberekwa. Kuchengetedza kwakatendeseka kunofungawo nezvechipfuva mubvunzo dzeCorsi (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 8) asi haishande kune avo vanowana mamakisi mbishi akakwirira kupfuura matanhatu muyedzo yekupedzisira.
Kurangarira kwekudhirowa, nekukurumidza uye kwakadzoserwa (NEPSY-II). Ndiwo wega muedzo wekuona uye visuospatial ndangariro iripo mukati meNEPSY-II uye imwe yemayedzo mashoma munzvimbo ino yezera rekuvandudza rinotangira pamakore matatu ezera (kusvika pamakore gumi nematanhatu). Inosanganisira kuburitswa kwegadziriro yemadhirowa akacherechedzwa kwemasekondi gumi, izvo zvishoma nezvishoma zvinowedzera kuomarara (zvese kuwanda kwemakadhi uye kune vanovhiringidza varipo), tichiwedzera makadhi maviri nguva imwe neimwe kumamisirwo akamboonekwa. Iyo inopa yakaparadzaniswa zviyero zvekuona uye visuospatial memory, zvese mukurumidza uye kwakadzoserwa kuyeuka.
About the semantic memory, miedzo yekuiongorora inonyanya kureva kutaura kwemazwi uye encyclopedic bvunzo uye ese ari mazwi uye anoonekwa:
Ruzivo ruzhinji rwepasi
Semantic bhatani yeLaiacona
Semantic bhatiri reSartori. Bhatiri rekutarisa akasiyana semantic masisitimu, kutaura uye kuoneka. Inopa bvunzo dzakawanda senge kutumidza miedzo pakuonekwa kwekuratidzira uye tsananguro yemazwi, kunzwisiswa kwemazwi, kujairirana pakuratidzwa uye kwekutaura kwemuromo, kuyedzwa kwesemantic kutaura kwemazwi uye kutonga pane fomu tsamba. Iyo bvunzo yakadzama inotora mukutarisa akawanda masemantic mapoka uye hazvidi kuti upe zvese (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
Mapiramidhi uye Bvunzo dzePalm
Kutonga kwechokwadi pane chimeric nhamba. bhatiri yeiyo kuongorora kwesemantic system. Iyo ine chikamu mune iyo nyaya inofanirwa kupa mutongo wechokwadi pane kuvepo kwenhamba dzakaratidzwa (chaidzo kana chimeric) uye chimwe chikamu chine sarudzo dzakawanda umo chidzidzo chinofanira kuratidza chimiro chaicho pakati pevanovhiringidza vakasiyana. Izvo zvinobatsira pakuongorora pre-semantic zvikamu zveiyo yekuona maitiro, nechinangwa chekuongorora ruzivo rwuripo muSemantic Sarudzo Yekuita Sisitimu (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
Kuzivikanwa uye kutumidzwa mazita ezvivakwa zvine mukurumbira
Kana iyo yakaderera nhamba yemamemary memory emiedzo ichienzaniswa neye episodic memory bvunzo ingatoonekwa, mutsauko unowoneka zvakanyanya nekutarisa ndangariro dzakazara:
Shina Kupedzisa Bvunzo. Ndomumwe wevashoma bvunzo yeongororo yeiyo yakazara memory (repetition priming) yakaburitswa muItari. Zvinoda 10-15 maminetsi enguva yekutungamira (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011) uye hazvisi nyore kuwana. Yakagadzirirwa vanhu vane makore makumi maviri kusvika makumi mapfumbamwe nematatu.
Per approondondi Maitiro ekuongorora mabasa makuru: bvunzo dzakashandiswa
Mukupfupisa, pane kusaenzana kukuru pakati pehuwandu hwekujekesa maringe neyakajeka miedzo yenguva refu, pakati peepisodic maringe nesemantic proofs, uye nepakati pemashoko maringe nema visuospatial proof. Kupfuurirazve, mazhinji eaya mabvunzo, kunyangwe akafanana nechitarisiko, anoita kunge asingawirirane, nekudaro zvichiratidza kuti havaenzanise maitiro akafanana ekuziva. Uye zvakare, mhedzisiro yekudzidza inowanzo kuwanikwa mune iyi bvunzo uye, kazhinji, izvi hazviunze mafomu akafanana kuti atarise shanduko yekushomeka kwevarwere.
Muchidimbu, kutarisisa kwakanyanya kunodiwa kubva kuchipatara mukusarudza bvunzo nekuti mhedzisiro inogona kuchinja zvakanyanya zvichienderana nemiedzo yakasarudzwa panguva yekuongororwa kwemutsipa.
Iwe unoda here kuwana yakanyanya kunaka bvunzo nenzvimbo uye chikoro? Edza yedu itsva yemahara GetTest web-app!
kudzidza, ndangariro yekuongororwa, neuropsychological diagnostic, memory, bvunzo, ndangariro bvunzo, ndangariro kuongororwa, neuropsychological kuongorora
Maitiro ekuyera kwenguva refu ndangariro: bvunzo dzakashandiswa2016-08-072021-02-05http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2016/08/hippocampus.jpg200px200px
Maitiro ekuongorora mabasa makuru: bvunzo dzakashandiswaKuziva uye kudzidza, Executive mabasa, Executive mabasa, Kuongorora
Kuongorora kwekutarisisa: bvunzo dzinoshandiswaAdHD, Kuziva uye kudzidza, Ongororo